ကြက်ခြေထောက်သုတ် Easy cook | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » ကြက်ခြေထောက်သုတ် Easy cook
ကြက်ခြေထောက်သုတ် Easy cook
Posted by weiwei on Mar 23, 2012 in Food, Drink & Recipes | 40 comments
wei's cook ကြက်ခြေထောက်သုတ်
ကြက်ခြေထောက်သုတ်လုပ်ဖြစ်ပုံက ရာဇ၀င်နဲ့ …
ကျွန်မက ကြက်ခြေထောက်ကို စားစရာလို့မထင်ခဲ့လို့ တစ်ခါမှ ချက်မစားဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ကောင်းမယ်လို့လဲ မထင်ခဲ့ဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်လလောက်က ရွာထဲကသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီ သွားလည်ဖြစ်ရင်း ကြက်ခြေထောက်သုတ်လိုက်ကျွေးမယ်ဆိုတာနဲ့ လမ်းဘေးမှာထိုင်စားရတဲ့ ဆိုင်ကလေးတစ်ဆိုင်ဆီရောက်သွားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မကြိုက်ဘူးလို့ပြောရမှာအားနာတာနဲ့ စားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုပြီး စားကြည့်မိရာက အခုလိုပို့စ်တင်ဖြစ်သည်အထိ ကိုယ်တိုင်လုပ်စားဖြစ်သွားပါတယ်။ လုပ်နည်းကလွယ်ကူပြီး စားလို့ကောင်းတဲ့အတွက် ခိုးချလိုက်ပြီး ပြန်လည်ဖောက်သည်ချလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် ….
ကြက်ခြေထောက် ……. (၅) ချောင်း
ကြက်သွန်နီဥကြီး …….. တစ်လုံး
ခရမ်းချဉ်သီး ……… တစ်လုံး
ရှမ်းနံနံ ………. ၂ ပင်
မန်းကျီးသီးမှည့် ….. အနဲငယ်
ပဲအကျက်မှုန့် ….. အနဲငယ်
ယိုးဒယားငံပြာရည် …. အနဲငယ်
ငရုတ်သီးအကျက်မှုန့် …. အနဲငယ်
ကြက်သွန်ဖြူဆီချက် …. အနဲငယ်
ကြက်ခြေထောက်ကို သန့်ရှင်းအောင်ဆေးကြောပြီး နူးသည်အထိ ပြုတ်ရပါမယ် … ကြက်ခြေထောက်ပြုတ်နေစဉ် ကြက်သွန်နီ၊ ခရမ်းချဉ်းသီး၊ ရှမ်းနံနံတို့ကို ပါးပါးလှီးထားပါမယ် … မန်ကျီးနှစ်စိမ်ထားမယ် … ကြက်ခြေထောက်နူးတဲ့အခါ ခုတ်ထစ်ပြီး လှီးထားသည့် ကြက်သွန် ခရမ်းချဉ်သီး ရှမ်းနံနံနှင့် မန်းကျီးနှစ် ပဲမှုန့် ငံပြာရည် ဆီချက် ငရုတ်သီးမှုန့်တို့ထည့်ပြီး အရသာအဆင်ပြေသလို ချိန်ဆလိုက်ပါက ဆိုင်မှာဝယ်စားသည်နဲ့တစ်ပုံစံထဲတူသော ကြက်ခြေထောက်သုတ်ကို ဈေးနှုန်းသက်သာ လွန်ကူစွာနဲ့ အိမ်မှာတင်လုပ်စားလို့ရပါပြီ … နေ့လည်နေ့ခင်း အပျင်းပြေစားနိုင်သလို ဘီဘီဖြင့်လဲ အမြည်းကောင်းကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကြောင်း …..
အန်တီဝေ ရေ တကယ်ကောင်းကြောင်း ထောက်ခံပါတယ်ဗျို့
အရင်ကတော့ မစားဖြစ်ဘူး ၊ စားဘူးသွားတော့ ကောင်းမှ ကောင်းပဲ
ဒီ ပို့စ် လေး ဖတ်မိရင်းနဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို သွားသတိယတယ်
သူ ကလုပ်လိုက်ရင် အထူးအဆန်းချည်းပဲ
သူက ၀က် ဥဏှောက် သိပ်ကြိုက်တာ ၊ ဘာကြောင့် အဲဒီလောက် စားတာလဲ မေးကြည့်တော့
ဥဏှောက် ကောင်းအောင်လို့တဲ့ ၊ အင်း သူလဲ အခုတော့ ထိုင်ဝမ် ရောက်နေပါပြီ
ဒီ ပို့စ် များ ဖတ်မိရင် အပြေးသန်အောင်လို့ ကြက်ခြေထောက်သုတ် စားချင်စားနေဦးမှာ
ကျွန်မ လုပ်ငန်းခိုးချခဲ့တဲ့ မူရင်းဆိုင်က ဟုမ်းလမ်းထိပ်က Orange ဆိုင်ဘေးနားမှာ ကပ်ဖွင့်ထားတဲ့ ရှမ်းဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ပါ … အရသာသိချင်ရင် သွားစားလို့ရတယ်နော် …
လွန်ခဲ့တဲ့.. နှစ်အစိတ်လောက်က.. အလုံက ၀ပ်ရှော့တခုမှာ..ကားပြင်ဆရာ သွားလုပ်ဖူးတယ်.။
အဲဒါ.. ၀ပ်ရှော့ဘေးနားး.. ကြက်ခြေထောက်.. အရေခွံတွေ တနေ့လုံးပြုတ်နေတာ မြင်တယ်လေ..
မြို့ထဲ.. ၁၄-၁၅လမ်းလောက်မှာ.. အဲဒီကြက်ခြေထောက်နဲ့.. ကြက်အရေခွံသုတ်ဆိုင်ကရှိတယ်..။
ဂျပန်ရော.. ယူအက်စ်ရော.. ကြက်ခြေထောက်များ.. အဲလိုလေးလုပ်ထားတာ.. ရှာမတွေဖူး..။
တရုတ်ပြည်မှာတော့ ကြက်ခြေထောက် တော်တော်စားကြတယ် … အရိုးထုတ်ပြီးသားခြေထောက်ကို အချဉ်နဲ့အစပ်စိမ်ထားပြီး စားကြတယ် … ရယ်ဒီမိတ်အစားအစာအနေနဲ့ အားရပါးရ စားလေ့ရှိပါတယ် … (တစ်ခါမှ မစားကြည့်ခဲ့မိဘူး …)
( စားကြည့်ပါမည် )
ထမင်းစားခါ နီးတွေ့လိုက်တော့ .. စိတ်တွေထိန်းမရတော့ … နီးရာ Junction Zawana သွားပြီး ကြက်ခြေထောက် တစ်ဗူး ပြေးဝယ်လိုက်တော့သည်။ ကြက်သွန်ဖြူ ဆီချက်တော့ မရှိဘူး .. ကြက်သွန်နီ ဆီချက်နဲ့ ပဲကစ်လိုက်တော့မယ်။ ရှမ်းနံနံတော့ သူ့ အနံ့ကို မကြိုက်ဘူး … မြန်မာ နံနံ ပင် နဲ့ ပဲ …..
မမဝေ ကြက်ခြေထောက်သုတ်ကိုတော့ကြိုက်တယ် ဘဲခြေထောက်သုတ်လို့ အရေပြားလေးတွေပဲဆိုသိပ် ကောင်းမှာပဲ နို့မဟုတ်ဆို အရိုးတွေထွေးနေရလို့အလုပ်ရှုပ်တယ် …. ကိုMလုလင်ပြောသလိုပဲ ရှမ်းနံနံမကြိုက်ဘူး … မြန်မာနံနံလဲမကြိုက်ဘူး အဲဒါအစား ရှောက်ရွက်လေးထည့်လိုက် အိုကေပဲ ….
ကြက်ခြေထောက်သုတ် အင်တာနက်ပေါ်တောင် ရောက်နေပြီ။
ဆိုင်ရှင်က စိတ်သိပ်မမှန်ဘူး။ ဆူး အမြဲ သွားစားနေကျ သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း လိုက်ကျွေးနေကျ ဆိုပေမဲ့ တခါနဲ့ တခါ လက်ရာမှန်မှန် သိပ်မရှိဘူး။
ဆိုင်ရှင် က ပြိုင်ဘက် ပေါ်နေမှန်း သိရင် ရင်ထုပြီး ပန်းကန် လာလုလိမ့်မယ်။
ဟိဟိ.. အဲဒီဆိုင်က စားလို့ကောင်းတာ ကြက်ခြေထောက် ၂ချောင်းလောက်ကို မစွတ်မပွတ် စားရလို့ ဖြစ်မယ်။
ထင်တော့ထင်တယ်။ ရွာထဲက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် စီ သွားတယ်။ ဟုမ်းလမ်း လို့လဲ ပါတယ် ဆိုတော့ .. ထင်ပါတယ်။ အစ်မကြီး .. မကြီး ဆူးရေ … ကျွန်တော် လာလည် တဲ့ အခါ လဲ ..အဲ့ ကြက်ခြေထောက်သုတ် လေး .. လိုက် ၀ယ်ကျွေးပါနော်….
ရပါ၏။ ဆိုင်ရှင်က စိတ်သိပ်မမှန်ဘူး။ ကောင်းတဲ့ အခါ အရမ်းကောင်းတယ် မကောင်းတဲ့ အခါ ဘာကြီးမှန်းကို မသိဘူး။ တော်တော် စိတ်နာတယ်။
အစပ်မထည့်ဘူး မှာ လိုက်တာ ငရုတ်သီးတွေနဲ့ ပါလာတယ်။
ဟယ် မှားနေပြီ ပြောတော့ ဒါက ဒီလိုပဲတဲ့..
သူငယ်ချင်းတွေ ခဏခဏ ခေါ်ပြီး သွားစားနေတာ.. သူတို့ လူ မမှတ်မိရင်တောင် ကိုယ်က သူတို့ ရုပ်တွေ မှတ်မိနေပြီ.. စားလိုက်တာနဲ့ သိတယ်.. ဘယ်လို ဆိုတာ ဒါတောင် ပြောင်လိမ်တာ အရမ်း စိတ်ပျက်ဖို့ ကောင်းတယ်။
လာစားတဲ့နေ့ ဆိုင်ရှင် စိတ်ကြည်တဲ့ နေ့ ဖြစ်ပါစေလို ဆုတောင်းပေးထားမယ်နော်။
ပြော နေစရာလား ကိုလုလင်ရ….
ကိုဆူးက လွှတ်သဘောကောင်းတာ …..
မှာစရာကို လိုဘူး ..ကျွေးမှာ …
သများကိုဆို စပွန်စာပေးမယ်တောင် ပြောထားတာ …
(ရိုးရိုးတွေးကြပါရွာသူား တို့.. ဘုန်းကြီးဝတ်ရင် သင်္ကန်း လှူမယ်ပြောတာပါ ဟီး….)
စပွန်ဆာ က ရာသက်ပန် ဘုန်းကြီးဝတ်ရန် စဉ်းစားနေသူများ အတွက်.. ထွက်ရင် အဆ ၁၀၀ ပြန်လျှော်ရမယ်။
ဆိုင်မှာသွားစားရတာက တက်စီခလဲကုန်သေး .. အချိန်လဲကုန်သေး … ဈေးလဲကြီးသေး ..
မီးဖိုချောင်ထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့တင် အလွယ်တကူလုပ်စားလို့အဆင်ပြေတာမို့ ရှယ်ယာလိုက်တာပါ …
လှည်းတန်းဈေးထဲကကြက်သားသယ်နဲ့ ရင်းနှီးနေတာမို့ ကြက်ထောက် နှစ်ရာဖိုးဝယ်ရင် ၅ ချောင်းတောင် ပေးတယ်လေ …
လမ်းထိပ်က ဆိုင်က ၂ချောင်း ထဲ ပါတဲ့ အသုတ်တပွဲ ၇၀၀ ကျပ်ပါ။
ဈေးက ၀ယ်ပြီး ကိုယ်တိုင် သုတ်တာ ပို တွက်ခြေ ကိုက်ပါကြောင်း
တော်ဘီ မဝေ ကြက်ခြေထောက်သုတ်တဲနေ့ပြော။
ဧည့်သည်က လာရင်စုံတွဲနော် သဘောပေါက်။
ရပါတယ်ကိုပေါက် … ၁၀ ချောင်း ၀ယ်ထားလိုက်မယ်နော် …
အိမ်ရှင် ၅ချောင်း ဧည့်သည် ၅ချောင်း လား
ကြက်ခြေထောက်ကို စွပ်ပြုတ်ရယ်၊ ကုလားဆိုင်မှာ ပဲဟင်းနဲ့ သုတ်တာရယ်ပဲစားဖူးတယ်။ ခုလိုမစားဖူးဘူး အကြံရသွားပြီ။ ချစ်ချစ်ကို လုပ်ကြွေးအုံးမယ်။ နွယ်ပင်ရဲ့ ငါးသရက်သီး ချက် ကို တွေ့ပြီး အခုပဲ ချက်ပြီးတာ။ နောက်နေ့ ကြက်ခြေထောက် သုတ်မယ်။
ကြက်ခြေထောက်သူပ်ဆို အရမ်းကြိုက် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဆိုင်မှာ အမြဲသွားစားဖြစ်တယ်
အိမ်မှာတော့ တစ်ခါမှ မလုပ်စားဖြစ်သေးဘူး …
ကြက်ဟင်းငါးသီးအစိမ်းကို ကြက်ဥနဲ့သုပ် ကြက်သားနည်းနည်းထဲ့ အရမ်းစားကောင်းတာ။
အသုတ်ကတော့ကိုယ်တွေလက်ရာမကောင်းလို့ သူများသုတ်တာပဲစားသွားတယ်နော် အမဝေေ၀။ နောက်မှအိမ်လာစားမယ်။ ရှောင်နေမှာလားဟင်င်င်င်င်။ အာဟိ
အိမ်အပြင်ကို ဟင်းနံ့မထွက်အောင် ပြူတင်းပေါက်တွေ ပိတ်ထားအုန်းမှ …
ဝေေ၀့ဆီက ကြက်ခြေထောက်သုပ်နည်းတင်တာ မတွေ့သေးလို့ မေးမလို့။
ကြက်ခြေထောက်၊ ဘဲခြေထောက် ကြိုက်တာနဲ့
ချဉ်ချဉ် (အစပ်တော့ သိပ်မကြိုက်ဘူး) ကြိုက်တာနဲ့
ဒီသုပ်နည်းလေး ကြည့်ပြီး ဒီတနင်္ဂနွေတော့ ကြက်ခြေထောက်တွေ ရောင်းကောင်းဦးမယ်။
ကြက်ခြေထောက်ကို ခရမ်းချဉ်သီးထည့်သုတ်တာလေးတော့ တစ်ခါမှ မစားဖူးဘူး … ။ ကုလားတွေ သုတ်တဲ့ မဆလာနဲ့ .. ပဲဟင်းရည်တွေစမ်းပြီး ရှောက်ရွက်လေးနဲ့ သုတ်တဲ့ နည်းပဲ စားဖူးတယ် … ။
ရွာထဲမှာ ကြက်ခြေထောက်သုတ်အကြောင်း … မဝေလား ဘယ်သူလားပဲ … တစ်ခါ တင်ခဲ့ဖူးသလိုပဲနော် … ၀ယ်စားရတာ မတန်လို့ ဈေးက၀ယ်ပြီး ကိုယ်တိုင်လုပ်စားတယ်ဆိုတဲ့ ပို့စ်ဖတ်ခဲ့ဖူးလို့ …. အဲ့ဒီတုန်းကတော့ ပုံလေးမပါဘူး မှတ်တယ် … ။
စားကြည့်ချင်ရင် အောရိန်းရှေ့က ဆိုင်မှာ ရတယ်။
တပွဲ ၇၀၀ တယောက်ကိုတောင် မ၀ တ၀.. အရိုးနွင်ရင်းနဲ့ စားလို့ ကုန်သွားတာပဲ။
သိတယ် အစ်မ အဲ့ဒီဆိုင်ကို ညဘက်ပဲ ထိုင်ဖြစ်တယ် … တစ်ပွဲကို နားဖာကလှော်နဲ့ နှစ်ဇွန်းစာလောက်ပဲ ပါတဲ့ ဆိုင် .. ဟိဟိ
ကြက်ခြေထောက်ဘဲခြေထောက် အားလုံးကောင်းပါတယ် သွေးတိုးရှိတဲ့လူတွေတော့မစားသင့်ဘူး
မန္တလေးမှာတော့ မီးတိုင်ဈေးက ၀ယ်စားဖူးတယ်။ တပွဲ ၇၀၀ ပဲ။ သူတို့က မြေပဲပါထည့်တယ်။ စားလို့ ကောင်းတယ် ။ ချဉ်ချဉ်စပ်စပ်ပဲ။ မဝေ လုပ်ပြလိုက်တော့လည်း လွယ်လွယ်လေးလိုပဲ။
ခေါက်ဆွဲပြုတ် ကို ဝေဝေရဲ့ ကြက်ခြေထောက်သုတ် နဲ့ စားနေပါပြီ။
ဆိုင်ကထက် တောင် အရသာ ရှိမဲ့ ပုံဘဲ ဝေဝေရေ။
ဒီတစ်ခါ တော့ အာလူးဆနွင်းမကင်း လို စမ်းလုပ်လို့ ရမှာမဟုတ်ဘူး။
ကြက်ခြေထောက် မရှိလို့။ :-(
ခြေထောက်မရှိရင် တောင်ပံတော့ရှိမှာပေါ့နော် … တောင်ပံနဲ့သုတ်စားရင်လဲ စားကောင်းမှာ သေချာပါတယ် …
Yes….. that’sagood idea.
I will do. Thanks again. :-)
မလေးမှာ ကြက်ခြေထောက် အဖြူ တွေ့ဖူးတယ် ထိုင်းကနေ ၀င်တာလို့ပြောတယ် အရိုးမပါဘူး ဈေးကြီးတယ် ဒင်းဆမ်း လိုပေါင်းစားတာ..နောက်ပြီး ကြက်အနက် (တကောင်လုံးအနက်) တရုတ် ဆေးမြစ်တွေနဲ့ ပေါင်းပြီးေ၇ာင်းကြတယ် ဒါလဲ ဈေးကြီးပါတယ် .. မွေးမြူရေး ကြက် တွေရဲ့ ကလီစာ တွေကိုတော့ စားသုံးသူ မရှိသလောက်ကိုနဲတယ် အရသာလဲမရှိပါဘူး..
သူငယ်ချင်းတယောက် ကြက်သားဆိုင်မှာ ကြက်ဆီဖူးတွေ တွေ့လို့ရောင်းပါပြောတာ အလကား ပေးလိုက်တယ် အများကြီးပဲ သန့်အောင်ဆေးကြော ဆီနဲ့ ကြော် ဘီဘီ နဲ့မြည်းပေါ့ အသိတယောက်အိမ်မှာတော့ ကြက်သားဟင်းချက်ရင် အဝေမတဲ့လို့ ကြက်ခြေထောက်ကို လူအရေအတွက်နဲ့ ထပ်ဝယ်ပြီး ထည့်ချက်ရတယ်.. အစ်မ တယောက်ကတော့ ကြက်ခြေထောက် စားရင် စုံ ပဲစားတယ် နှစ်ချောင်း လေးချောင်း …. ဘယ်တော့မှ တစ်ချောင်း သုံးချောင်း လုံးဝ(လုံးဝ) မစားပါဘူး .. ကြက်ခြေထောက်ကို ကြိုက်ကြတာ ပြောပါတယ်.. .ရိုးရိုးကြက်ခြေထောက်ကို ငရုတ်သီးအနှစ် အပေါ့ အငံ ဘာညာဘာညာစပ် ပြီးရင်ပေါင်း တူ ကလေးနဲ့ညှပ် ပါးစပ်ထဲကို အသာထည့် စုတ်လိုက်ရင် အရိုး ပြောင်နေအောင် စားတာ တွေ့ဖူးထားတော့ မြန်မာ့နည်း မြန်မာ့ဟန်နဲ့ ငရုတ်သီးကြက်သွန်ထောင်းပြီးသားနဲ့ဆား ဆနွင်း နယ် အပေါ့အငံထည့် သုတ်စား ချက်စားမဟုတ်ပဲ ရေနွေးငွေ့နဲ့ ပေါင်းစားကြည့်၍ အစားအစာကို တီထွင် ကြစေချင်ပါကြောင်း ……:P:P
ကြက်ခြေထောက်ဆိုတာ တစ်ခါမှ မစားဖူးဘူး၊အဲဒီတော့ ဘယ်သူ ၀ယ်ကျွေးမလဲ၊ဒါမှမဟုတ် လုပ်ကျွေးလည်း စိတ်မဆိုးဘူး။
ဒါဆိုရင်တော့ စားဖူးလို့ နီးစပ်ပြီလို့သာ မှတ်လိုက်ပေတော့ အန်တီပဒုမ္မာ ….
ဟယ် နင်တို့ဟာကလဲ ကလေးလက်ကလေးတွေကိုစားနေတဲ့အတိုင်းပဲတဲ့
ဈေးပေါတယ်နော်။ ရှမ်းပြည်မှာတော့အဲလိုသုတ်ဘူးရယ် ကြက်ခြေထောက်ဖြူစွပ်စွပ်ကို
ဗီနီကာထည့် (သံပရာရည်ထည့်သူတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်) ပြီးရင်ကြာဆံလေး သုတ်စားလို့ရတဲ့ကြာဇံဆိုပဲ
(ယောက်ျားလေးဆိုတော့သိပ်တော့သိဘူး)ထည့် ငရုတ်သီးစိမ်းလေးများထည့် မြေပဲဆံကိုမကွဲတကွဲထောင်း
ထည့် ကြက်သွန်မိတ်နည်းနည်းထည့်တယ် ဆီချက်ကြက်သွန်ဖြူအဖတ်ကလေးများကို နည်းနည်းပဲထည့်တယ်
အရိုးလုံးဝမပါ အရည်ခွံတွေချည်း ဘာစားကောင်းသလဲမမေးနဲ့ဗျာ လုပ်သာမလုပ်တတ်တာ စားတော့စား
တတ်တာမို့ ခုအစ်မဝေတင်တဲ့ကြက်ခြေထောက်ကို ပုံလေးထဲကကြည့်ရင်းအရသာခံ၍ ညဆယ့်တစ်နာရီထိုး
ကာနီးဆယ်မိနစ်အလိုမှာ ရှမ်းပြည်သားဗိုက်ဆာလာလို့ ဝက်သားဟင်းနဲ့ထမင်းလွေးနေပါကြောင်း……..
မှတ်ချက် ။ ။ အစ်မဝေပြောတဲ့ရှမ်းနံနံပင်ကို ရှမ်းပြည်မှာ ကုလားနံနံပင်လို့ခေါ်တယ်ဗျ
ရှမ်းနံနံဆိုတာ ပြည်မကြီးကပြောကြတာကိုလိုက်ဆိုကြတဲ့အဆို ဗမာနံနံပင်ပဲအစားများတယ် ရှမ်းနံနံပင်က
သပ်သပ်ရှိတယ်ဗျ သူကအနံ့တအားပြင်းတယ် ဗမာနံနံ၊တရုတ်နံနံ(ဗမာနံနံကဲ့သို့ဆိုပေမယ့်အရွက်နဲနဲပို
ကြီးပြီး အနံမတူ)၊ကုလားနံနံ(အစ်မဝေပြောတဲ့ရှမ်းနံနံ)ဆိုတဲ့ နံတဲ့ဟာတွေထက် အဆပေါင်းများစွားပြင်း
ကြက်ခြေထောက်သုတ်တော့ မစားဘူးဘူး၊ ကြက်ခြေထောက် ချဉ်စပ်စွပ်ပြုတ်တော့သောက်ဖူးတယ်၊ မမဝေရဲ့ ကြက်ခြေထောက်သုတ်လေးကြည့်ပြီး ဗိုက်စာလာပြီ၊ အခုလို မျှဝေပေးလို့ ကျေးဇူးပါနော်..
chit tee myat says:
မနက်ဖြန်ကျရင် မေမေကို လုပ်ကျွေးခိုင်းရမယ်…